Yusuf Garaad: August 2014
Sheeko Gaaban - Leo Tolstoy
Maalin ayaa nin Boqor ahi wuxuu is yiri haddii uu jawaab u heli lahaa saddax su’aalood in aan weligiis talo gefteen.
Waa goorma howl kasta wakhtiga ay ku habboon tahay in la qabto? Waayo dadka ugu muhiimsan ee ay tahay in uu wax ka dhegeysto oo uu la shaqeeyo? Waase maxay waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in uu qabto?
Si jawaabo loogu helo su’aalahaas, Boqorku wuxuu soo saaray wareegto Boqortooyadiisa oo dhan la gaarsiiyay taas oo sheegeysa in uu abaalmarin qiima weyn siin doono qofkii bara ficil kastaa wakhtiga uu ku habboon yahay, iyo kuwa ay yihiin dadka ugu muhiimsan iyo sida uu ku garan karo waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in la qabto waxa ay yihiin.
Niman aqoon leh ayaa ku soo xoomay Qasriga Boqortooyada su’aalihiina siyaabo kala duwan ayay uga jawaabeen.
Su’aasha koowaad iyaga oo uga jawaabaya ayay qaar kula taliyeen in Boqorku uu sameysto jadwal wax walba koobaya. Saacad kasta, maalin kasta, bil kasta iyo sannad kasta waxa uu qaban lahaa uu ku qoondeeyo jadwalkaas. Markaas ayay kuu suurta geli kartaa, ayay ku yiraahdeen, in aad howl walba qabato wakhtigeeda ku habboon.
Qof kale ayaa ku jawaabay in aanay suurta gal ahayn in wax walba la sii qorsheeyo. Wuxuu ku taliyay in Boqorku uu dhinac iska dhigo howlaha aan muhiimka ahayn oo dhan oo markaas uu wax walba uu aad ugu fiirsado si uu u ogaado wax kasta goorta ay ku habboon yihiin in uu qabto.
Qof kale ayaa soo jeediyay, in Boqorku uusan keligiis awoodi karin in howl kasta uu ogaado xilliga ku habboon oo ay tahay in uu qabto. Wuxuu u sheegay in uu u baahan yahay in uu dhiso Gole Cuqaal, markaasna uu ku socdo talada Golaha.
Mid kale wuxuu yiri waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin talo deg deg ah oo isla markiiba laga gaaro oo ma sugi karaan talo Gole ka imaaneysa. Markaa haddii Boqorku u baahan yahay in uu sii ogaado waxa dhici doona waa in uu la tashadaa faaliyayaasha iyo sixirroolayaasha.
Sidoo kale, ayaa loogu wareeray jawaabta su’aasha labaad.
Qof ayaa soo jeediyay in ay tahay in Boqorku uu kalsoonidiisa oo dhan siiyo la taliyayaashiisa, mid kale wuxuu ku dooday in uu wadaaddada la tashado, iyada oo qaar kalena ay soo jeediyeen in uu dhakhaatiirta ka talo qaato. Lakiin qaar kale ayaa qabay in uu dagaal yahannada.
Su’aasha saddexaad iyaduna waxay keentay jawaabo badan oo kala duwan. Qaar waxay ku jawaabeen in saynisku yahay waxa adduunka ugu muhiimsan. Qaar kale diinta ayay yiraahdeen waa waxa ugu muhiimsan. Qaarna waxay dhaheen waxa ugu muhiimsan waa xirfad militeri.
Boqorku kuma qanicin jawaabahan. Abaal marinna muu bixin.
Waa Tarjumada Yusuf-Garaad.
F. G. Adiga oo mahadsan, fadlan wixii aad faallo ka bixineyso ku qor isla boggan qeybtiisa hoose.
Posted by Yusuf Garaad at 22:37:00